Sidee Market ICO ka bedeli doono 2018? - Blockchain News
2017 arkay koritaanka qarxa tirada ICOs, sida hab kacaan in uu soo jiito maal-. Sanadkaan 234 mashaariicda ICO ka Bixin badan $3.7 billion, iyadoo qaybta ugu badan ee maalgelin guud lagu soo jiidatay ka May si October, sida ay Coinschedule. Khubarada waxay aaminsan yihiin in sanadka soo socda, si kastaba ha ahaatee, habkani hoos u dhici doonto iyo suuqa ICO wajihi doonaan hoos u dhac weyn iyo Manhajkooda.
Sida laga soo xigtay Jerry Brito, Agaasimaha Fulinta ee ururka aan macaash quful-Center, Dawladaha kordhin doonaa gacanta iibka calaamo. Sanadkan Commission Securities US iyo Exchange ah (SEC) ayaa sheegay in lacagta birta ah dalwaddii ama calaamadihii in la bixiyaa ama iibin laga yaabaa securities. Haddii ay securities, bixin iyo sale oo ka mid ah lacagta birta ah dalwaddii ama calaamadihii in ICO ah ku xiran yihiin sharciyada federaalka securities. Arrintan la xiriira, SEC u gudbiyay eedeeyay fadeexad iyo non-waafaqsan sharciga ka dhanka ah dhowr qabanqaabiyayaasha ICO. Brito ayaa qaba in dalalka kale, taas oo la doonayo in ay qaadaan tallaabooyin burcad-fadeexad, raaci doona Tusaale ahaan Maraykanka.
Baahida loo qabo iibka calaamo in ay u hoggaansamaan xeerarka SEC, weheliso maal-’ damac kalsooni weyn, keeni kartaa in isbedel cusub. In 2018, waan arki doonaa ah ee dhufto ee qurbaanka la mid ah calaamadihii cusub oo si fiican u qalmi doonaa calaamadihii ka hor ay oggol yahay in la iibiyo, oo kaa caawin doona maal-dhigi xukummo fiican iyaga oo ku saabsan.
Brito saadaaliyay in markii hore, dhufto ee waxay noqon doontaa oo kaliya u furan maal-aqoonsan.
Sidaas, sida professionalizes warshadaha, Waxaa laga yaabaa waannu og nahay in xumbo ICO ayaa qarxaya. Dhab ahaan, Yaasiin aad ah ayaa tilmaamaya in ay jiraan fiisa si fudud u yar. Sida model ah maaliyad cusub, ICOs halkan waa in ay sii joogaan.
Oliver Bussmann, aasaasaha iyo lammaanahaaga maaraynta at Advisory Bussmann, Madaxweynaha Crypto Valley Association iyo koox hore ee ATP, ma-faa'iido-doon oo ah agaasimaha maamulka ee Swiss dhaqaale haysta UBS, si adag u aaminsan yahay in dunida ICOs noqon doonaa dheeraad ah oo qaan in 2018 sida ciyaartoyda dhaqameed dheeraad ah ka qayb qaataan. Sidaas darteed, waxay maal doonaa waayo-aragnimo IPO iyo khibrad si ay u horumariyaan suuqa cusub iyo ganacsiga oo dhan ku eekaan doonaa si ku dayasho fiican u dhisan oo xirfad dheeraad ah ee maal-jiidanaya.
In ka badan 12-18 bilood ee soo socda, Waxaan filayaa waxaa jiri doona sifooyinka ICO ee, sida dhismaha buugga, binta, qiimaynta xawaaladaha, iyo wixii la mid ah. Sida aynu hore u bilaabeen in ay arkaan, waxa ay noqon doontaa adag tahay in la helo maalgelin si fudud on dambe ee warqadda cad. Investors weyddiinayaa qorshe ganacsi dhawaaqa iyo heerka sare ee daahfurnaanta.
Madaxa waaxda farsamada ee udhaqaajiyaa, Stephan Thomas ogolaado dood ku xusan, sida uu sheegay post at Quora (madal bulshada aqoonta la wadaago). Wuxuu arkaa badan oo isbarbar ruxruxo ICO maanta iyo ruxruxo altcoin oo ka mid ah 2014. Arrintan la xiriira, Crore hore siin doonaa si ay ICO oo ka fudud oo isku dheeli tiran; ICOs badan waxay yeelan doonaan si ay u beddelaan hab si loo soo jiito maal-. Mark Lurie ayaa sidoo kale aaminsan in sanadka soo socda waxaa jiri doona waxyaabo badan oo caasimadda ka badan hay'adaha oo dhan tegi doonaa mashaariicda tayada sareeya.
Waxaa jiri doona shakeout ah ICOs iyo diyaarad si tayo leh. Waxaa jiri doona badashada ah ICOs halkaas oo dhowr tegi doonaa dhaceen. Waxaa jiri doona waxyaabo badan oo caasimadda ka badan hay'adaha oo dhan in ay mashaariic tayo sareeya tegi doonaa. Taasi waa wixii dhacay intii lagu jiray xiisadda dhaqaale la caasimada u ganay iyo wareeg caddaalad koritaanka, sidoo kale. shirkadaha intooda badan ma soo jeedin karo wax lacag, laakiin kuwa u abaabuli karaa lacag u sameeyey qiimahooda ayaa run ahaantii sare.
In 2018, dhaqaaqo agoon ah oo ku saabsan qayb ka mid ah shirkadaha samaynta ICOs iyo Seeraar la xiriira alaabta uu noqon doonaa in ay qafaalashada ah ee dadweynaha iyo warbaahinta off ah “lacagta caddaanka ah digital” fikradda, sida wararka banki. Waa tusaale u ah in mar dambe macno, iyo waxa uu ku dhaco jidka fahankeenna saxda ah ee technology cusub oo u eg lacag laakiin run ahaantii aan la. Laakiin ka qaybgalayaasha ICO yeelan doonaan in ay sameeyaan dadaal aad u weyn in la beddelo image ee warshadaha. William Mougayar, Investor a si fiican u yaqaan Canada, ganacsadaha, iyo author of dhowr buugaagta blockchain, dhigayaa in suuqa ICO hadda iyo calaamadihii soo jiidato ciyaartoyda khalad.
Ma aha oo kaliya waa Token 1.0 jiidanaya noocyada qaldan mashaariic, laakiin waxa ay sidoo kale waxaa soo jiitay noocyada qaldan dadka u arka guulaha fursad ka daadgureyntaasi lacagta a, kor ka badnaa oo balanqaaday dayaxa, la xisaabtanka yar in la qabto ka dhanka ah. Ugu horeyn, waa in aan dib u eegaan oo codsan ku tabo cusub aasaasiga ah ee blockchain ah. Haddaba, waxaan u baahan tahay si ay u qiimeeyaan shaqeynayaan calaamo adag, oo aan ka badan-injineernimada awoodaha calaamadii. Waxaan u baahanahay in ay ku riday blockchain galay isla'egta dib, oo aan calaamadii.
Vitalik Buterin leeyahay oo ku saabsan nooc cusub oo calaamadihii iyo sidoo. Waxa uu hubo in ay ku 2018-2019 nooc cusub oo ah calaamadihii, ICO 2.0, muuqan doonaa suuqa ICO dheeraad ah baaluq.
Waxaa jira qaar ka mid ah fikradaha wanaagsan, waxaa jira fikrado badan oo laga cabsado, oo waxaa jira wax badan oo aad u, fikrado aad u xun, iyo ilaa xad ah fiisa yar iyo sidoo kale. Waxaan filayaa in calaamadihii 2.0 iyo cayn kasta oo wax walba oo dadka ku bilaaban doono dhismaha ee 2018 iyo 2019 doono, guud, noqon tayo sarreeyaan. Gaar ahaan marka aan bilaabaan arkay wixii cawaaqibka racii ugu horreeyey ee calaamadihii ku jiraan mudada dhexe-to-dheer.
Wargeyska An Iran ...
Filibiin SEC waxay jeelka ...
Yahoo waxaa ka mid ah BTC t ...
Post Next:About ICO: Yaa ururiyay lacag badan inta lagu jiro iibka calaamo